पाका महिला गर्भवती हुनु कत्तिको जोखिमपूर्ण ?
चैत २६, २०७३ शनिवार १३:३६:१४ प्रकाशित
छोरीको मृत्युले शोकाकुल भएकी बेलायतकी एक महिला छोरीको अन्डामार्फत आफू गर्भवती हुन चाहान्छिन् । अर्थात छोरीको अन्डालाई प्रयोग गरी हजुरआमा बन्न चाहान्छिन् । के यस्तो गर्भ बोक्दा खतरा छैन त ?
सामान्यतया युवतीहरुको तुलनामा वृद्ध महिलाहरु बच्चा जन्माउने दृष्टिकोणले उच्च खतरामा हुन्छन् । तर ५० वर्षमाथिका महिलाहरु इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभीएफ) माफर्त गर्भवती हुने गरेका छन् ।
तर बेलायती महिला (श्रीमति एम) ले आफ्नी दिवंगत छोरीको इच्छा पुरा गर्न चाहेको बताउछिन् । छोरीको आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि (सन् २०११) मा बाउल क्यान्सर भएर २८ वर्षमा निधन भएको थियो ।
मृत्यु अगाडि उनले आफ्नो अन्डालाई भन्डारण केन्द्रमा चिस्याएर राखेको न्युर्योकटाइम्सले जनाएको छ । छोरीको चिस्याएको अन्डालाई न्युर्योकमा लैजान पाउँ भनि श्रमिती एमले गरेको निवेदनलाई गत जुन ३० बलायतको अदालतले अनुमति दिएको छ ।
यदि श्रीमति एम आफ्नो योजनामा सफल भइन भने निश्चय नै उनी कोखबाटै नाती जन्माउने विश्वकै पहिलो पहिलो महिला हुनेछिन् । सन् २०११ मा भर्जिनियाकी ६१ वर्षीय महिलाले आफ्नी ३५ वर्षकी छोरी र ज्वाईको गर्भ आफ्नो पाठेघरमा राखेर हजुरआमा बनेकी थिइन् । छोरीमा मिसक्यारियजको समस्या देखिएपछि उनकी आमाले गर्भ बोकेकी थिइन् । त्यस्तै यस वर्षको सुरु तिर एक महिला छोरीको गर्भधारण गरी आमा बनेकी थिइन् ।
अझ बृद्ध अवस्थामा आमा बन्न चाहने महिलाको कोखलाई पिम्याचुअर वर्थले तुहाइदिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई प्राय सी सेक्सन डेलिभरीको आवश्यकता दर्शाइएको थियो ।
पाका महिला गर्भवती हुँदा उनीहरुको मुटु र रक्तनलीले थप रगत पम्प गर्न सक्दैन की भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै भएको युनिर्भसिटी अफ शिकागेका चिकित्सक डा डेभिड कोहेन बताउँछन् ।
उमेरले डाँडो काटेसँगै स्वभाविक रुपमा महिलाको कोखमा पनि परिवर्तन आउँछ । भ्रुणको वृद्धिको लागि कोखपनि उर्वर हुनुपर्छ , कोलम्बिया युनिर्भसिटी मेडिकल सेन्टरका प्रजनन तथा बाँझोपन उपचार शाखाका चिकित्सक डा मार्क साउर भन्छन् । पाका महिला गर्भवती हुनुअगाडि होल बडी चेक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
( लाइभ साइन्स डट कममा प्रकाशित लेखको अनुबादित अंश )